DAAWO: DF Soomaaliya oo Mag-dhaw ka bixinaysa dadkii lagu dilay Doorashadii Baydhabo ka dhacday December 2018-kii.
BAYDHABO(P-TIMES) – Ra’iisulwasaaraha Xukuumadda Federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa kulamo kula yeeshay magaalada Baydhabo, wuxuu balan-qaaday in ay dib u eegayaan dhacdooyinkii ka dhacay magaaladaas doorashadii Koonfur Galbeed oo ay ku dhinteen ku dhawaad 18 qof oo ah dadka rayidka ah oo lagu dilay arrimaha doorashooyinka.
Odayaasha Dhaqanka ayaa u sheegay Raysalwasaaraha Soomaaliya in ay doonayaan in la fuliyo Mag-dhawgii ay horey u balanqaaday Madaxtooyada Soomaaliya, waxayna sheegeen in ay ka sugayaan Madaxweyne Farmaajo fulinta dalabkaas.
Sidaas oo kale, Odayaashu waxay codsadeen in lasii daayo Mukhtaar Roobow Cali, oo kamid ahaa musharaxiintii doorashadaas, isla markaasna hadda ku jira gacanta dawladda Faderaalka Soomaaliya, oo ay sheegeen in uusan waxba dambi laheyn.
HALKAN KA DAAWO WARARKII OO DHAN
Xukuumadda Soomaaliya waxay balan-qaaday in tiro koobka la hayo ay bixin doonaan magtooda, sidaas oo kalena wadaadka u xiran ee Mr, Roobow ayay sheegeen in ay sii deyn doonaan laamaha ku shaqada leh, maadaama ay horey dhinacyadu uga wada hadleen.
Ra’iisulwasaaraha Soomaaliya ayaa sadexdii maalmood lasoo dhaafay kusugnaa deegaanada Baay & Bakool, isagoo halkaas kulamo kula yeeshay qeybaha bulshada oo ay ka wada hadleen arrimaha siyaasadda iyo shaqooyinka dawladda ku saleysan.
Xukuumadda ayaa bixisay lacag dhan 500Kun oo dollar looguna-talogalay arrimo ay ka mid yihiin Caafimaadka, Waxbarashada, Dhalinyaradda & Hooyooyinka, kuwaas oo lagu bixiyey meelaha Isbitaalada, garoomada kubadda cagta iyo agabyada deg deg ah ee baahida loo qabay.